Wasiirkii A/gudaha Galmudug oo kasoo horjeestay xil ka qaadista lagu sameeyay
Saturday January 14, 2017 - 09:49:44 in Wararka by Super Admin
Jaamac Xasan Salaad, wasiirkii arimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Galmudug ayaa kasoo horjeestay xil ka qaadistii uu ku sameeyay madaxweynaha maamulka Galmudug.
Jaamac Xasan, ayaa si cad uga hor yimid xil ka qaadista lagu sameeyay, isagoo sheegay in madaxweynaha Galmudug uusan xil ka qaadis ku sameyn karin, maadaama codka kalsoonida lagala laabtay.
C/kariin Xuseen Guuleed, ayaa xilkaan u magacaabay Maxamed Xayir Nuur.
Jaamac Xasan, wuxuu sheegay in warqada xilka looga qaaday uu qoray C/kariin Guuleed oo xilka laga qaaday, sida uu sheegayna aan awood u laheyn inuu xil cusub magacaabaa.
“Madaxweynihii hore ayaa warqadaasi qoray, baraha bulshada ayaana ku arkay, ma jirto awood uu Guuleed xilka iiga qaadaa, sababtoo ah isaga ayaaba kalsooni heysan”ayuu yiri Jaamac.
Wasiirkii arimaha gudaha Galmudug ayaa kamid ah dadka sida aad kaga soo horjeeda Guuleed, waxaana lagu eedeeyay inuu ka mid ahaa xubnihii taageeray mooshinka xildhibaanada Galmudug xilka ay kaga qaadeen Guuleed.